Indlela yokubeka iingoma kwiTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 239
Umzi-mveliso wedijithali ukhula ngakumbi mihla le, nawo ukhulisa amaqonga ohlukeneyo edijithali ayinxalenye yokuphila kwabo kwinqanaba labasebenzisi abasebenza ngokungathandabuzekiyo abagcina i-intanethi kunye nezi ntlobo zeendawo. Injalo loo maphepha ewebhu okanye amaqonga e-intanethi avumela ukuhanjiswa komxholo.
Kodwa indawo eyonwabelayo ukubukela nokudlala imidlalo yevidiyo ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zixabisekileyo, kuba umxholo wayo ugcinwa kwaye uwela zonke iintlobo zemida, ngaphandle kwamathandabuzo UTwitch uyaqhubeka ukuba nguvulindlela kunye nenkokeli kweli candelo. Ke ngoko, inani lokhuphiswano alinakuphikiswa kwaye uninzi lufuna ukwahluka kwaye longeze izinto ezintsha kumxholo wazo, njengomculo. Ukwenza oku, ezinye iingcebiso ziya kushiyeka.
Useto lweNgoma kwiTwitch
Iqonga leTwitch alithandabuzeki ukuba lelinye lezona zifunwa kakhulu, kunye nenye yezona zisetyenziswa ngabantu abaninzi ukuthengisa nokubonisa zonke iintlobo zomxholo kusasazo lwe-Intanethi. Ngenxa yemfuno kunye nenani elikhulu labasebenzisi abayisebenzisela ukufumana abaphulaphuli, abantu abaninzi bafuna ukubonakala ngaphakathi kuyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeendlela endiphumayo ngayo kukusebenzisa umculo ngelixa ndisenza usasazo. Into abangayaziyo abaninzi yile ukuba iingoma ezahlukeneyo zigcinwe kwaye zikhuselwe lilungelo lokushicilela ezinokuvelisa iingxaki ezahlukeneyo ukuba awuyazi le nto.
Ewe, ilungelo lokushicilela yinto ebuthathaka ngokwenene kwaye ke ngenxa yoko uninzi lwazo zinokuhlwaywa. Ke, ukuze ukwazi ukuzisebenzisa ngaphandle kokuba naluphi na uhlobo lweengxaki kuthumelo lwazo, kuba oku kuyimfuneko ukuthatha ingqalelo Wazi njani ukuba zeziphi iingoma ezinokusetyenziswa ngokusemthethweni kwiqonga leTwitch?
Iinketho zokusebenzisa iingoma kwiTwitch
Kukho iindlela ezimbalwa zokusebenzisa iingoma ezidumileyo ngaphandle kwelungelo lokushicilela eliyingxaki. Ngenxa yoku, kukho imvumelwano yenye yeenkonzo ezigunyazisiweyo ukuba zisasaze umculo, xa ubhalisile kubo, phakathi kwazo kukho "Isandi soBhubhane", esixabisa i-euro ezingama-13 ngenyanga kunye ne "Envato Elements" eneendleko ze-14,50 zeerandi ngenyanga.
Umxholo womculo ovumelekileyo kwiTwitch kwaye awuthethi naluphi na uhlobo lwesohlwayo; umculo ophethwe ngumntu, iingoma abantu abanelayisensi yazo, Imisebenzi eyenziwe kwiiTwitch Sings, iingoma ezivela kwilayibrari yomculo weqonga.
Phakathi kweengoma zomculo ezingavumelekanga ukuba zisetyenziswe kwiTwitch ziyaqaqanjiswa; i Iinkqubo zeradio-style, iiseshoni ze-DJ, imidlalo yeKaraoke. Ukudlala kunye neengoma. Ukufumana umculo weTwitch kunye nokuphepha iingxaki, kuyacetyiswa ukuba undwendwele iiwebhusayithi ezikhethekileyo zomculo ezinje:
Naliphi na elinye ithala leencwadi elifanayo, egunyazisiweyo yoku.
Kuyimfuneko ukuqaqambisa ukuba kukho amaqonga asimahla apheleleyo asebenza ukwenza oku, ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo, njengoko zinjalo; ilayibrari yomculo yeTwitch, iTwitch Fm 'yeSpotify, iPretzel Rocks, phakathi kwabanye.
1 Useto lweNgoma kwiTwitch
1.1 Iinketho zokusebenzisa iingoma kwiTwitch